Xasaasi: Dowladda mareykanka oo si cad u sheegtay in dhawaan soomalia ay ka bilaabi doonta duqeyn lagu beegsanaayo saldhigyada – Kismaayo24 News Agency
Xasaasi: Dowladda mareykanka oo si cad u sheegtay in dhawaan soomalia ay ka bilaabi doonta duqeyn lagu beegsanaayo saldhigyada
by Tifaftiraha K24 29th April 2017 042
Warbaahinta dalka Maraykanka ayaa baahiyay in dawlada Maraykanka ay dhawaan Soomaaliya ka bilaabayso duqeyn lagu bartilmaamaydsanayo hogaamiyaasha Xarakadda Al-Shabab.
War kasoo baxay aqalka cad ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu isku diyaarinayaan weeraro ka dhan hogaamiyaasha Al-Shabab waxaana hawlgaladaas ay ka dhacayaan saldhigyada ay Al-Shabab ku leeyihiin gudaha Soomaaliya.
Warkaan waxaa lagu sheegay in loo digayo hay’adaha samafalka ee ka shaqeeya gudaha Soomaaliya waxaana la faray inay sameeyaan wargalin la xariirta goobaha ay ka shaqeeyaan.
Amarkaan oo soo baxay 24,kii bishaan ayaa lagu sheegay inay hay’adaha samafalku feejignaan galaan oo ay soo gudbiyaan xogaha xarumaha ay ka shaqeeyaan si ay dhibaato u gaarin.
Agaasimaha xarunta cawimaada gar gaarka iyo masiibooyinka dibbadda Maraykanka Jeremy Konyndyk ayaa sheegay inay ka taxadaryaan in la dhibaateeyo xarumo caafimaad ama ay hawl samafal ka socoto.
Warbaahinta qaarkood ee dalka Ingiriiska ayaa baahiyay in saraakiisha ciidamada Maraykanka ee Africa jooga lagu wargaliyay inay qaadaan weeraro dhanka cirka ah oo bartilmaameedkoodu noqonayo hogaamiyaasha Xarakadda Al-Shabab.
M/weynaha Maraykanka Donald Trump ayaa dhawaan saxiixay in qorshe dagaal oo ka dhan ururo hubeysan oo Al-Shabab ka mid yahay.
Maraykanka waxaa la aaminsan inay Soomaaliya ka geysteen in ka badan 40 weerar tan iyo sanadkii 2001, inta ugu badanna waxay dhaceen sanadihii 2015 iyo 2016 sida lagu sheegay xog ay baahisay hay’adda CIA,da Maraykanka.
Weerarada Maraykanku Soomaaliya ka geystay waxaa lagu qaraajiyay hogaamiyaal badan oo Shabab ka tirsanaa waxaana ka mid ah Aadan Xaashi Cayrow oo ku dhintay duqeyn ka dhacday degmada Dhuusa- Mareeb iyo Axmed Cabdi Godane oo hogaamiyaha Al-Shabab ahaa lagu dilay gobolka Sh/hoose.
Sidoo kale waxaa jiray hogaamiyaal ajanabi ahaa oo iyana Al-Shabab la joogay.
Hey’adda Amnesty International oo digniin iyo baaq culus u jeedisay maamulka puntland kadib markii ay……
DEG DEG: Biriq xoogan oo khasaaro nafeyd geesatay ayaa ku dhacday deegaan lagu magacaabo……
QM maxay ka tiri ansixinta gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka.
admin 7th July 2015 27th August 2015
XOG: Wasiir Odawaa oo qorshayaal culus u gaaray Magaalada Cadaado, Isagoona……………………..
Tifaftiraha K24 16th August 2016
Sanbalooshe oo Meel aan laga fileyn ka soo Muuqday ka dib Kiiskii Qalbi dhagax
admin 25th November 2017